नातिनीको लागी दूध लिन हिंडेका हजुरबुवाको प्रहरीले खुट्टा भाँचिदिए - Jagaran Post
Home/प्रदेश २/नातिनीको लागी दूध लिन हिंडेका हजुरबुवाको प्रहरीले खुट्टा भाँचिदिए
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीका सेवानिवृत्त कर्मचारी ६७ वर्षीय नागेन्द्र पटेलका २ जना नातिनी छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका– १६ निवासी पटेल सधैँझैं आइतबार बिहान पनि नजिकैको पसलमा दूध लिन जाँदै थिए, नातिनीहरुका लागि ।
नयाँ बसपार्कबाट नेसनल मेडिकल कलेज जाने मोडमा पुगेपछि त्यहाँ रहेका प्रहरीले उनलाई कहाँबाट आएको ? कहाँ जान लागेको ? भन्दै केरकार गरे । र, जहाँबाट आएको उतै फर्किन आदेश दिए । चोकमा अरु मानिस पनि उभिरहेका थिए । प्रहरीले यति भनेपछि पटेल फर्किए । पछाडि फर्किने बित्तिकै प्रहरीले उनको दाहिने खुट्टामा लठ्ठी हान्यो ।
उनी त्यहीं ढले । पहिलेदेखि चिनजानका व्यक्तिले उनलाई बोकेर घर पुर्‍याए ।
हिँडडुल गर्न नसकेपछि छोरा गुन्जनले बिहान करिब ८ बजे उपचारका लागि उनलाई नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल लगे । एक्स–रे मा खुट्टाको हड्डी भाँचिएको पाइयो । चिकित्सकले उनको खुट्टामा प्लास्टर गरिदिएका छन् ।
८ वर्ष अगाडि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीबाट सेवानिवृत्त भएका नगेन्द्रले प्रहरीको आदेश मानेर फर्किदा पनि पछाडिबाट लठ्ठी हानिएको भनेर चित्त दुखाएका छन् । ‘न कुनै वादविवाद भयो, न कुनै कुरा, पटेलले भने, ‘आदेश मानेर दूध नलिई फर्किरहेकै थिएँ, तैपनि पछाडिबाट हिर्काए । हामी त आफैं लकडाउनमा निस्किनौं । बच्चालाई दूध लिन गएको खुट्टै भाँचिदिए ।’
अस्थाई प्रहरी चौकी बसपार्कका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विजय शाहीले हालसम्म पीडित आफूकहाँ नआएको बताए । ‘हाम्रो टोलीले कुटेको छैन, बसपार्कमा इलाका प्रहरी कार्यालय श्रीपुर र जिल्ला प्रहरीको टोली पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘घटनाको यर्थाथ बुझ्दै छु, प्रहरीलाई बदनाम गर्न अनर्गल प्रचार गरेको पनि हुनसक्छन् ।’
शव्द, तस्विर : ईकान्तिपुर डट कम
एकल महिलाको भत्ता कटौती नगर्न संसदीय समितिको निर्णय
२०७७ जेष्ठ १२, सोमबार १५:५९ गते
सबैभन्दा कम १० भ्रष्ट देश
२०७६ असार १८, बुधबार ०५:१२ गते
आमसञ्‍चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण,नियमन र अभिलेखीकरण अब प्रदेशबाट
२०७६ असार १७, मंगलवार १५:४० गते
थाइल्याण्डको फुकेटमा नेपाली पर्यटन प्रबर्द्धन
२०७६ असार २१, शनिबार १८:२३ गते
प्रदेश नं.२ को नाम र केन्द्र तोक्न सर्वदलिय बैठक बस्दै
२०७६ चैत्र ४, मंगलवार १३:४८ गते